को हुन् नव निर्वाचित अध्यक्ष मनिष मिश्र ? | सहारा टाइम्स
Home » Politics » को हुन् नव निर्वाचित अध्यक्ष मनिष मिश्र ?
को हुन् नव निर्वाचित अध्यक्ष मनिष मिश्र ?
२७ वर्षीया मनिष मिश्र तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टको अध्यक्षमा चयन हुनुभएको छ । सानै उमेरमा राजनीतिकमा ठूलो फड्को मार्नुभएका मिश्रले विद्यार्थी राजनीतिकलाई सही ढंगबाट अगाडि बढाउन सके मात्र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिने बताउनु हुन्छ उहाँ ।
अध्यक्षमा चयन भएपछि कलैयामा अबिर र मालाबाट सजिएका मिश्रले सहारा टाइम्सलाई भन्नुभयो, नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्नुभयो भने विद्यार्थी राजनीतिकबाट सञ्चालित भएको छ । जतिपनि ठूला नेताहरु देख्नुहुन्छ ती सबै विद्यार्थी राजनीतिकबाट नै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ । त्यसैले आफू पनि विद्यार्थी राजनीतिक रोजेको हुँ ।’
सर्लाही खैरवाका बुवा उदयनारायण मिश्र र बुवा विभा मिश्रका जेठो छोरा मनिष मिश्र तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन भएदेखि नै विद्यार्थी राजनीतिकमा लाग्नु भएको थियो । शंकरदेव क्याम्पसबाट स्नातक सकाएर एमबीए पढ्दै गर्नुभएका मिश्र तराई मधेश विद्यार्थी फ्रन्टमा सहमहासचिवबाट राजनीतिक शुरुवात गर्नुभएको थियो । त्यसपछि उहाँ महासचिव बन्नुभएको थियो ।
फ्रन्ट गठन हुनुभन्दा पहिला पनि विद्यार्थी राजनीतिकमा स्वतन्त्र रुपमा सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । त्यही बेलादेखि संगठित राजनीतिक गर्दै आउनु भएको थियो ।
विद्यार्थी राजनीतिकमा लामो संघर्षका कारणले नै उहाँ फ्रन्टको अध्यक्षमा सर्वसम्मति चयन हुनुभएको हो । उहाँसँग अन्य चारजना पनि अध्यक्षका उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । अन्त्यमा गएर उहाँ नै सर्वसम्मतिबाट चयन हुनुभयो । समग्र मधेश शैक्षिक प्रदेश बनाउने जोड दिनुभएका उहाँ दुई नम्बर प्रदेशलाई पूर्ण शिक्षित बनाउनु पर्ने लक्ष्यका साथ विद्यार्थी राजनीतिकमा लाग्नु भएको छ ।
मधेश आन्दोलनमा सर्लाही जिल्लामा सक्रिय भएर काम गर्नुभएका उहाँले पार्टीको क्षेत्रीय तथा जिल्ला अधिवेशन पनि सम्पन्न गराउनु भएको छ । जब कि अन्य जिल्लाहरुमा विवाद रहेको देखिन्छ ।
युवा नेताको रुपमा जिल्लामा पनि परिचित उहाँ राजनीतिकलाई पेसा होइन, कर्मक्षेत्र तथा सेवाको रुपमा लिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । बैशाख १२ गते आएको विनाशकारी भूकम्पको बेला पार्टीका तर्फबाट पहाडी जिल्लामा राहत लिएर उहाँ पुग्नु भएको थियो । त्यो बेला टहरा निर्माणदेखि लिएर राहत वितरणमा सक्रिय भूमिका रहेका उहाँ मधेशको राजनीतिक बारे भारतीय नेतासँग कुराकानी गर्न पटक पटक भारत पनि जानु भएको छ । उहाँ विद्यार्थीको कार्यक्रममा उत्तर कोरियाको पनि भ्रमण गर्नुभएको छ ।
उहाँ सक्रिय राजनीतिकमा लागेको भएपनि राजनीतिकमा टिक्नका लागि आफ्नो व्यवसायी पनि सञ्चालन गर्नुभएको छ । काठमाडौको शान्तिनगरमा उहाँको आफ्नै औषधी पसल रहेको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, आफ्नो आय स्रोत नभएपछि राजनीतिकमा भ्रष्ट बनाई दिन्छ । अरुप्रति निर्भर बनाई दिन्छ । अरु प्रति निर्भर भएपछि राजनीतिकमा अगाडि बढ्न सकिदैन र यो कुरा म विद्यार्थी राजनीतिकमा लागु गर्छु । राजनीतिकमा लाग्नेलाई कुनै नकुनै पार्ट टाइम जागिर वा विजनेश हुनुपर्छ । अनि मात्र उ अगाडि बढ्छ ।’